Ogeessa Seeraa: Aangoon qabeenya uumamaa bulchuu kan naannooleeti - BBC News Afaan Oromoo
Ogeessa Seeraa: Aangoon qabeenya uumamaa bulchuu kan naannooleeti
Goodayyaa suuraa Warshaa oomisha warqii MIDROC
Hayyamni Warshaa omisha warqee MIDROC Lagadambii kan haaromfamuun isaa tibbana Gudinaalee Gujii keessatti mormii uummataa kaase haqamuu isaa Ministeera Albuudaa, Boba'aafi Gaazii Uumaamaa irraa dhagahe jechuun maddi Oduu Faanaa kaleessa galgala gabaasee ture.
Hamma qaamni bilisaa ta'e ummataafi caasaa mootummaa hirmaachise qorannaa gaggeessuun bu'aa qorannichaa ifoomsutti, warshichi warqee baasuus ta'e oomishuu dhorkameera, kunis gaaffii uummataaf deebii ta'a jedheera Ministeerichi.
Mormiin uummataa sababa kanaan dhalate hanga kaleessatti itti fufee lubbuun namoota afurii baduu qondaalonni hospitaala Adoolaa BBC'tti himaniiru.
Rakkooleen akkasii osoo badii lubbuu namaa hin dhaqqabsiisiin seeraan akkamiin furmaata argachuu danda'u, kana keessatti ammoo gaheen mootummaa federaalaafi naannoo maali kan jedhuufi dhimmoota kaan irratti ogeessa seeraa Obbo Betiruu Dibaabaa haasofsiiseeera.
Eeyyama albuuda baasuu kan akka Miidirook kanaa keennuudhaaf aangoo kallattii kan qabu mootumaa federaalaati moo? Kan naannoleeti?
Goodayyaa suuraa Magaalaa Shaakkisoo bara 2017
Heerriifi labsiin maal jedha?
Mootummaan fedraalaa seera waliigalaa naannoleen hundi qabeenya uumamaa ittin bulchan baasuu danda'a malee, seera xiyyeefataa kan akka hayyama kennuufaa raawwachuufi qabeenya uumamaa isaanii bulchuuf aangoo kan qaban naannoleedha.
Bu'uura kanaan Mootummaan Naannoo Oromiyaa aangoo heerri kenneefi hojiirra oolchaa jiraaree?
Akka Obbo Batiruun jedhanitti, Mootummaan naannoo mariifi waliigaltee kamiyyuu osoo hin fayyadamiin bu'uura seera waliigaltee sirna federaalizimii ittiin caasefameen aangoo isaa battalaan fayyadamuu ni danda'a.
Barmaatileen amma mootummaan federaalaa jalqabe, kan akka hayyama qabeenya uumamaa keennuufi haquufaa waan heeratti bu'u waan ta'eef, mootummaan naannoo aangootti fayyadamuudha malee mariin hin barbaachisu, jechuun ibsu ogeessi kun.
Kubbaaniyyaan Albuuda baasu kan akka MIDROC dursee maal gochuu qaba ture? Erga miidhaan gahe qorannoo gaggeessina jechuu kana ija seeraan akkamitti ilaaltu gaaffii jedhuufis, Obbo Batiruun biizinasiin kamiyyuu gaafa jalqabu akka kaayyootti qabatee kan hojiitti galuu qabu, invastimantichi ''mirga namoomaa ni foyyeessaa'' jiraattotaaf waan dabalu qaba jedhame yeroo amanamu qofaadha kan hayyamni kennamuufi qabu kan jiedhu ilaalcha keessa galcheeti.
Garuu jedhu Obbo Batiruun, MIDROC yoo fudhannee akkuma lafarratti argaa jirruu, jiraattotaaf waa dabaluu dhiisuu qofa miti, inumaayyuu miidhaa garaagaraa irratti geessisaa jira.
Mirgi namaa isaanii naanno qulqulluufi foyya'aa keessa jiraachuu isaanii sarabamuu irra darbe miidhaa mirga namoomaa qaama qabaachuun illee irraa molqameera. Dargaggoonni naannoo sana gaa'ila godhachuuf illee hamilee akka dhaban kan godhedha, jechuun ibsu.
Qaamni mootummaa uumata achi jiru mariisisaa ture garuu kemikaalli uummata miidhaa jiru hin jiru jedheeraa, yoo jiraates ni qoratamaa jechuun qoranicha Addis Aababa Yunivarsiitiif kenneeraa. Qorannoon silaa akkamitti gaggeefama, qaama walabaan gaggeefamuu hin qabu jettuu, kan jedhu yeroo deebisan qorannoon jalqaba ta'uu qaba ture jedhan.
Obbo Batiruun, "Qilleensarratti hayyama argachuunuu seeraan aladha. Amma immoo gurmiin qorattoota kanaa waan gaafatamuu qabudha. Gurmiin isaanii hojii isaanii bilisaan akka hojjetan kan isaan taasisu mitii. Namoonni komee uumataa beekaniifi haala qabatamaa jiraattotaa beekan ta'uu qaba gurmaa'insi garee sanaa," jechuun ibsan.
"Beenyaa dolaara miiliyoona 400 " warra warqii qotaniif